शनिबार, मंसिर ४, २०७८
प्रचण्डलाई जसरी पनि सिध्याउन चाहन्छन् केपी ओली (भिडियोसहित)
२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा गर्दा यसका सर्वाेच्च कमाण्डर थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।
उनलाई आर्दश मानेर जनयुद्धमा होमिएकाहरु सर्वहराका नेता भनेर सम्मान गर्थे । उनै प्रचण्डलाई अहिले राष्ट्रिय समस्याका रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।
कुनै बेला नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि परिवारवाद भित्र्याएको आरोप लाग्ने गथ्र्यो । अहिले त्यो आरोप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि सरेको छ । आफ्नो सचिवालयदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म आफ्नै परिवारलाई हाबी बनाएको भन्दै उनको आलोचना हुन्छ ।
त्यतिमात्रै होइन, सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा समेत निर्णायक बन्दै आएका प्रचण्डका कारण अस्थिरता मच्चीएको भन्दै उनलाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा चित्रित गर्न थालिएको छ । प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हुन् भनेर देखाउन खोज्ने र प्रमाणित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका एक पात्र हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । कुनैबेला प्रचण्डसंग पार्टी एकता नै गरेर ५० बर्ष देशमा शासन गर्ने दाबी गरेका ओली तीन बर्षमै नेकपा विभाजन भएपछि प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्याको रुपमा देखाउँदै आएका छन् ।
वितेको डेढ दशकमा प्रचण्ड सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा पनि निर्णायक छन् । पछिल्लो पटक प्रचण्ड नियतीको मार ओलीले ब्यहोरेका छन् । प्रचण्डले चाहे हरहालतमा सरकार बन्ने र ढल्ने परम्परा नै बसेको छ । अधिकांश समय आफ्नै स्वार्थ र कहिलेकाही आफुमाथि पर्न भएपनि अरुलाई सत्तामा ल्याउन प्रचण्डको भूमिका अह्म देखिदै आएको छ । यसैकारण पनि उनलाई राष्ट्रिय समस्या मानिएको हो । तर माओवादी नेताहरु यो स्वीकार्दैनन् । बरु देशी विदेशी शक्तिहरु लागेर प्रचण्डलाई मदन भण्डारीकै अवस्थामा पु¥याउन खोजेको दाबी गर्छन ।
प्रचण्डकै योगदान स्वरुप मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बन्न सफल भएको थियो । समानुपातिक समावेशिता लागु गर्दा उत्पीडनमा परेका वर्गहरुले राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन् । तर चरम सत्ता भोगले प्रचण्डलाई पतनको बाटोमा पु¥याएको कुरा पनि नकार्न मिल्दैन । २०६४ पछि निरन्तर पहिलो पार्टी हुँदा सत्तामा, दोस्रो पार्टी हुँदा पनि सत्तामा, तेस्रो पार्टी हुँदा पनि सत्तामै जानुपर्ने प्रचण्डको चरम सत्ताभोगले उपलब्धीलाई पनि फिक्का बनाउन पुग्यो । जतिबेला अवसर आइपर्छ मौका छोपेर सत्तामा कुदिहाल्ने चरित्रकै कारण आज प्रचण्डप्रतिको नकारात्मक्ता बढेको विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
यो डेढ दशकमा सरकारमा सहभागी हुनुमात्रै प्रचण्डको लक्ष्य जस्तो देखिएको छ । सत्तामा पुग्नु र जानु नौलो कुरा नहोला । तर सत्तामा जाने अवसर प्राप्त भएर पनि काम गर्न नसक्नु भने दुर्भाग्य हो । जनयुद्धकालिन सहयात्रीहरु छिन्नभिन्न बनेका छन् । यसैकारण पार्टी अहिले अस्तित्व रक्षाको तहमा छन् । फलतः विचार–सिदान्त भन्दा फरक रहेका पार्टीसंग पनि सहकार्य गर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन् । जुन माओवादीले पटकपटक ब्यहोर्दै आएको छ । फलतः अहिले सम्पूर्ण पंक्तिले प्रचण्डमाथि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेको छ ।
रामचन्द्र पौडेलको भावुक प्रस्ताव– तपाईंहरु नमिल्ने भए म कांग्रेसबाट बिदा हुन्छु
मैले ‌केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेँ, अरुले टीको लगाएर पद लिए
साझा उम्मेदवार चयन गर्न पौडेल पक्षको छलफल शुरु
पौडेल समूह अन्तिम कसरतमा, चाक्सीबारीको फाइनल वार्तामा को को गए ?
तानातानमा सिटौला, हस्याङफस्याङ गर्दै चण्डोल आइपुगेका पौडेललाई दिए यस्तो जवाफ
देउवाको प्रश्न, ‘तपाईलाई उम्मेदवार बनाउँदा सभापतिमा कसरी जितिन्छ ?’
भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ रावत दुर्घटनामा परेको हेलिकोप्टर कस्तो हो ?
अधुरै रह्यो मुक्तिनाथ भ्रमण गर्ने विपिन रावतको त्यो सपना…
रहेनन् विपिन रावत दम्पती : छोरीहरुले एकैपकट गुमाए आमा-बुवा
विपिन रावतको ५ वर्षअघिको त्यो नेपाल भ्रमण…
यी हुन् हेलिकप्टर दुर्घटनामा जीवितै फेला परेका एकमात्र व्यक्ति
को हुन् भारतको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपीन रावत ? जसले श्रीमतीसहित आफुले पनि हेलिकप्टर दुर्घनामा ज्यान गुमाए
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा घाइते भारतीय रक्षा प्रमुख विपिन रावत र उनकी पत्नीको निधन